Posted on Aug 16 2020
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य फेरि बढाएको छ। निगमले आज राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी मूल्य एकरएक रुपैयाँ बढाएको हो। अब पेट्रोलको दाम १०५ रुपैयाँ २५ पैसा..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य..
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक ग्राहकले आफ्नो घरको मिटर आफैंले रिडिङ गर्न सक्ने र महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छ । प्राधिकरणले केही दिनयता मोबाइल एप्लिकेसन ९एप०..
आज एकै दिन सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला ७५..
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले सोमबार राति १२ बजे देखि लागू हुने गरी पेट्रोलिमको मूल्य घटाएको हो । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २..
आजदेखि नयाँ ग्यासको सिलिन्डर किन्न नपाइने, पुरानोले मात्रै पाउने
काठमाडौं । बजारमा ग्यास सिलिन्डरको आपूर्तीमा समस्या देखिएपछि आजदेखि नयाँ सिलिन्डरसहित ग्यास नपाइने भएको छ । ग्यास उद्योगी र एलपी ग्यास बिक्रेता महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबारदेखि बजारमा..
बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । शुक्रबार अमेरिकी डलर..
सुनको मूल्यमा दैनिक नयाँ रेकर्ड, आजै १ हजार ८ सयले बढ्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य लगातार बढेर दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ। फागुन २३ गते शुक्रबार पनि सुन तोलामा १ हजार ८०० रुपैयाँले बढेर ८२ हजार ५०० रुपैयाँ कायम..
सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, आज पनि बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बृद्धि भएको छ । बुधवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ८० हजार ५ सय रहेको थियो । भने आज मूल्य बृद्धि..
सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड एकैदिन तोलाको २२ सय रुपैयाँ बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउले आज बुधबार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनको भाउ आज एकैदिन तोलामा २२ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको अहिलेसम्म कै महंगो तोलाको ८० हजार ५ सय रुपैयाँ..
काठमाडौं । सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा थप ५ रुपैयाँ विकास कर थपेर १० रुपैया पुर्‍याएको छ । बिहीवार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सोही मन्त्रालयको..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य समायोजन गरेको छ । सोमबार राती १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँले घटाएको हो..
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भरतपुर महानगरपालिका–२२ ले पटिहानीमा नवनिर्मित ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ को शुभारम्भ गरे । बिहीबार शुभारम्भ गर्दै उनले पटिहानीको पर्यटन विकास..
काठमाडौं । सुनको मूल्यले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। आइतबार प्रतितोला सुनको मूल्य ७५ हजार ५ सय पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। नेपाली बजारमा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च मूल्य..
सहकारी एकीकरण गर्दै कामपाले १ हजार ८५६ सहकारीलाई ७०० बनाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिले महानगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थालाई एकापसमा एकीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा बानेश्वर र पुतलीसडक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सात सहकारीलाई एकीकरण गर्ने तयारी गरिएको..
किन पर्यो नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयर विश्वका खराब एयरलाइन्सको सूचीमा
काठमाडौं । विश्वका खराब विमानको सूचीमा नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरका विमान परेका छन् । एयरलाइन रेटिङ डटकमले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालका दुई विमान नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयर पहिलो..
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको बढ्यो मूल्य, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मुल्य वृद्धि गरेको छ। सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो। निगमले..
आयातित चिनीको मूल्य भन्दा नेपालमा उत्पादित चिनी महँगो
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भारतबाट आयातित चिनीको मूल्य भन्दा नेपालमा उत्पादित चिनी महँगो हुनुको जवाफ उद्योगीहरुले दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले उद्योगीहरुले चिनी उत्पादन महँगो बनाउने र किसानलाई ऊखुको मूल्य..
चीनको इ–कमर्स कम्पनी अलीबाबाको एकै दिनमा ४३ खर्ब रुपैयाँको सामान बिक्री
काठमाडौं । चीनको इ–कमर्स कम्पनी अलिबाबाको ‘सिंगल डे सेल’ मा २४ घण्टाभित्र ३८.४ अर्ब डलर अर्थात् ४३ खर्ब रुपैयाँको बिक्री भएको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ‘सिंगल डे सेल’..
दशैंलाई नयाँ नोट चाहियो ? यी बैंकमा जानुहोस् तुरुन्तै पाइन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बै‌कले दशैंका लागि नयाँ नोट साट्ने काम आजबाट शुरू गरेको छ । बैंकले आजदेखी आगामी १७ गतेसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा..
अनुगमन टोली पुगेपछि दरबारमार्गमा भागाभाग, किन सटर लगाएर भागे व्यवसायी
काठमाडौं । सरकारी अनुगमन टोली अनुगमनका लागि दरबारमार्ग पुग्दा यहाँका पसलेहरू पसल नै बन्द गरेर भागेका छन् । बिहीवार दरबारमार्गस्थित शेर्पा मलका पसले तथा कर्मचारीहरू पसल बन्द गरेर भागेका हुन् । मलभित्रका..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारबाट १०० रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा पठाएको छ । सय दरका ३ अर्ब बराबरका नयाँ नोट मंगलबारदेखि बजारमा पठाइएको हो । सर्वसाधारण नझुक्किउन् भनेर राष्ट्र..
काठमाडौं । आजदेखि दसैंका लागि अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुलेको छ। गत भदौ २६ गते यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी तथा ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजदेखि अग्रिम बस टिकट बुकिङ..
Posted on Sep 21 2019
काठमाडौं । दशैंमा उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको लागि भोलि आइतबारबाट बसको टिकट बुकिङ खुला हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा यातायात कम्पनीहरुले टिकट बुकिङ सुरु गर्न लागिएको हो । आइतबारबाट..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर ५० अमेरिकी डलर र..
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य स्वदेशी कपडा लगाउनुपर्ने : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्दा बाध्यकारी बनाइने बताएका छन् । खतिवडाले अस्पताल, सुरक्षाकर्मी, निजामति कर्मचारीलगायतले लगाउने पोशाकको लागि स्वदेशी..
काठमाडौं । नेपालको ५४.५ प्रतिशत व्यवसाय युवाले सञ्चालन गरिरहेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणनाका अनुसार, देशका कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ४ लाख ५०..
ग्यासको मुल्य सरकारले धनीलाई बढाएर गरिबलाई घटाउने
काठमाडौं । सरकारले निम्न आय भएकाहरुका लागि छिट्टै एलपी ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले निम्न आय भएका उपभोक्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले..
साउन महिनामै प्यान नम्बर लिने ३ लाख बढे
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो महिनामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या १३.४ प्रतिशतले बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जनाएअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म २१..
काठमाडौ। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि आफ्नो ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण लिएर मात्र उसँग कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ। यही असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको निर्देशिका अनुसार, बैंकले मागेजस्तै केवाइसी..
Results 889: You are at page 1 of 30